कोरोना संक्रमितका लागि फलदायी बन्दै अर्कबटी
लुम्बिनी, १८ भदौ । बुटवल बेलबासका रोशन घिमिरेले खानाको स्वाद थाहा पाउन छाडेको तीन दिन भइसकेको थियो । उनले खाना त खान्थे तर के खाएँ भन्ने पत्तै पाएका थिएनन् । एक दिन उनले आफूले खानाको स्वादै नपाएको भनी घरपरिवारलाई सुनाए । उनको कुरा सुनेर सबै अचम्मित भए तर बुबा डीआर भने चिन्तित भए ।
रुपन्देहीका अग्रज पत्रकार डीआर घिमिरेले इञ्जिनियरिङ पढ्दै गरेका छोराले खानाको स्वाद नै नपाएको भनेपछि कतै कोरोना त भएन भनी उसलाई अर्कबटी खुवाए । पत्रकार घिमिरेले भने, ‘खानाको स्वादै थाहा पाएको छैन भन्ने छोराले त अर्कबटी दुई खुराक खानेबित्तिकै खानाको स्वाद आएको बतायो ।’ घिमिरेले कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको मान्छेले खानाको स्वाद थाहा नपाउने, गन्ध थाहा नपाउने जस्ता लक्षण हुने कुरा कतै पढेका थिए । सोही आधारमा उनले अर्कबटी खुवाएका थिए ।
पत्रकार घिमिरे जडिबुटीमा चासो राख्ने हुँदा अर्कबटीका विषयमा पनि जानकार थिए । उनले भने, ‘खानाको स्वाद थाहा नपाएको भनेपछि अर्कबटी दुई खुराक खाँदा छोराले बल्ल स्वाद थाहा पाउन थाल्यो । तेस्रो दिनमा पीसीआर चेक गराउँदा कोरोना पोजिटिभ देखियो । अनि लगातार दश दिनसम्म अर्कबटी साँझबिहान खाएर चेक गराउँदा कोरोना नेगेटिभ आयो ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले आफ्नो छोरालाई मात्रै नभएर कोरोना लक्षण देखिएका छिमेकीलाई पनि अर्कबटी खाँदा लाभदायी भएको बताए । उनले भने, ‘साथी दीपक पन्थीको परिवारलाई पनि कोरोना पोजेटिभ देखियो । उनलाई पनि मैले अर्कबटी प्रयोग गर्न सुझाएँ । त्यो प्रयोग गरेपछि राम्रो भयो । यसैगरी बेलबासमै एकजना म्याडमले खानाको स्वादै आउन छाड्यो भनेपछि उनले पनि प्रयोग गर्नुभयो । दुई खुराक खाएपछि स्वादको लक्षण फर्कियो भन्नुभयो ।’
यसैगरी आफूहरुले पनि उक्त औषधि प्रयोग गरेको कोरोना संक्रमित भएर हाल निको भएका भैरहवाका दुई पत्रकारले बताए । ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ भैरहवाका संवाददाता सलमान खानले भने, ‘मैले पनि प्रयोग गरेको हुँ, अर्कबटीले राम्रै ग¥यो ।’ ‘इमेज टिभी’का भैरहवा संवाददाता दीपक घिमिरेले पनि आफू संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बस्दा अर्कबटी नियमित सेवन गरेको बताए । दीपकले भने, ‘अर्कबटी खाए कोराना निको हुन्छ भनेपछि मैले पनि प्रयोग गरेँ । अर्कबटीको नियमित सेवन र नियमित व्यायामले म कोरानालाई जित्न सफल भएको हुँ ।’
आयुर्वेद औषधिका सप्लायर्स छपियाका सम्पद खातीले यतिबेला अर्कबटीको माग बढेर गएको बताए । उनले भने, ‘यसको प्रभावकारितासँगै माग पनि बढेर गएको छ ।’ कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका बेला आयुर्वेद क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि निरन्तर अनुसन्धानरत चिकित्सक डा. बद्री गौतमले अर्कबटी पत्ता लगाएका हुन् । डा. गौतमका अनुसार सिद्धमकध्वज, स्वर्णभष्म र अन्य पाँच जडिबुटीको मिश्रणबाट अर्कबटी बनाउने गरिन्छ । अर्कबटी बनाउन आवश्यक जडिबुटी नेपालमै पाइन्छ । हाल अर्कबटी नामले परिचित उक्त औषधिको नाम डा. गौतमले कोरोनाघ्नबटी प्रस्ताव गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस पोजेटिभ पुष्टि भएको वा कोरोनाको लक्षण देखिएमा अर्कबटी प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘कोरोना पोजेटिभ भएको वा गन्ध थाहा नपाएका अवस्थामा, स्वाद थाहा नपाएका अवस्थामा, ज्वरो आएका अवस्थामा र धेरै थकान लागेका अवस्थामा अर्कबटी १० दिनसम्म निरन्तर सेवन गरेमा निको हुन्छ ।’
होम आइसोलेसनमा बसेका १३७ जना कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरु उक्त औषधि प्रयोगबाट निको भएको उनको जिकिर छ । त्रय्मबकम जडिबुटी सहकारी संस्था लिमिटेड रुपन्देहीका अध्यक्ष डा. गौतमले यसअघि सुत्केरीका लागि प्रसूतामृत, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हर्मन फन्ट नामक चिया, गौमूत्रको मिश्रणबाट निर्मित पञ्चगव्य, कपाल झर्न रोक्ने गौंथली तेल, भर्दनन तेल र बलवान् सातुसहित १७ प्रकारका विभिन्न औषधिजन्य उत्पादन बजारमा ल्याएका छन् । तीमध्ये बलवान् सातु नेपाल खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले प्रमाणीकरण गरिसकेको खाद्य पदार्थसमेत हो ।
आयुर्वेदाचार्य डा. गौतम २९-३० वर्षदेखि आयुर्वेद क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेका अनुसन्धानकर्ता भएको वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डा. प्रीतमकुमार शर्माले बताए । तीन दशकभन्दा बढी समय नेपाल सरकारको आयुर्वेद अस्पतालमा सेवा गरेर सेवानिवृत्त डा. शर्माले भने, ‘डा. गौतम आयुर्वेद क्षेत्रको अनुसन्धानकर्ता हो । उहाँले धेरै किसिमका जडिबुटीजन्य औषधि बनाउनु भएको छ । अर्कबटीका बारेमा मैले पनि सुनेको छु तर प्रयोग गर्न भने अझै पाएको छैन । विगतमा उहाँले बनाएका औषधि हेर्दा यो पनि प्रभावकारी नै होला,’ डा. शर्माले भने ।
पत्रकार डीआर सरकार अर्कबटीका विषयमा तत्काल चासो दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कतिपय एलोपेथिक खाँदा पनि शतप्रतिशत निको हुन्न तर यो औषधि अत्यन्तै प्रभावकारी भएको मैले अनुभूत गरेको छु । यस विषयमा धेरै अलमल नगरी आयुर्वेद काउन्सिल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गम्भीर चासो दिएर सर्वसाधारणले सहजै पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नु वर्तमान महामारीको बेला ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।’ रासस